Monday November 13, 2017 - 18:17:34 in Wararka by Super Admin
Inta badan degmooyinka iyo deegaannada uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay 'Somaliland' ee kajira gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya waxaa ka bilaabatay doorashooyinka madaxtinimo.
Wararka ka imaanaya magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ayaa sheegaya in boqolaal kun oo qof ay isugusoo baxeen waddooyinka halkaas oo la dhigay sanaadiiqda cod bixinta.
Saraakiisha booliska maamulka ‘Somaliland’ ayaa warbaahinta u sheegay in si habsami leh ay doorashooyinku uga socdaan dhammaan degmooyinka.
Doorashada madaxtinimada waxaa ku tartamaya sedax musharax oo ka kala socda Xisbiyada Kulmiya,UCIDA iyo Waddani.
Faysal Cali Waraabe oo ka socda Xisbiga Ucida ayaa warbaahinta u sheegay in uu ku qanci doono natiijada ay ku dhawaaqaan guddiga doorashada wuxuuna ugu baaqay taageerayaashiisa in wax rabshada ah aysan sameyn haddii laga adkaado.
Muuse Biixi oo isna ka socda Xisbiga Kulmiye ee talada haya ayaa ballan qaaday in uu ku qanci doono waxa kasoo baxa guddiga doorashada, C/raxmaan Cirro isna katirsan Xisbiga waddani ayaa ballan qaaday in haddii uu doorashada kusoo baxo uu isbedel dhan walba ah sameyn doono.
ku dhawaad 60 qof oo ka socda waxa loogu yeero beesha Caalamka ayaa kor joogta ahaan ugu sugan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ‘Somaliland’.
Shabakadaha bulshadu ku xiriirto ee Facebook iyo twitter ayaa laxiray sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka wuxuuna u sababeeyay in laga hortago faafinta natiijo aan sax aheyn oo guddigooda kasoo baxin.
Saadaal hor dhac ah waxay sheegaysaa in doorashada ay ku guuleysan doonaan Laba Nin midkoo oo kala ah Muuse Biixi ama Cabdi Raxmaan Cirro waxaana lafilayaa in kaalinta sedaxaad uu galo Faysal Cali Waraabe oo ah siyaasi ruug caddaa ah.